K9 Mask® "शार्क ट्याank्क" मा नोभेम्बर २० 20-8 अपराह्न EST / PST देखि ABC - K9 मास्कमा राम्रो एयर टीम द्वारा
कुपन चाँडै समाप्त हुन्छ!
घर > वायु प्रदूषण कुकुर ब्लग > K9 Mask® "शार्क ट्याank्क" मा नोभेम्बर २० 20-pm बेलुका EST / PST ABC मा
K9 Mask® "शार्क ट्याank्क" मा नोभेम्बर २० 20-pm बेलुका EST / PST ABC मा
नोभेम्बर 16, 2020
अस्टिन, टेक्सास - अस्टिनका उद्यमी किर्बी होम्स र उनका चचेरे भाई इभन डोगर्टी शुक्रबार, नोभेम्बर २०, बिहान 20 बजे एबीसी (सीएसटी) मा हिट टेलिभिजन कार्यक्रम "शार्क ट्याank्क" मा प्रदर्शित हुनेछन्।
किर्बी र इभान गुड एयर टीम एलएलसीका सह-मालिकहरू हुन्, अष्टिनमा आधारित कम्पनी जसले संसारको पहिलो एयर फिल्टर मास्क विशेष रूपमा बोलाइएको कुकुरहरूका लागि तयार पारिएको हो। K9 Mask®। यो कुकुरहरु लाई धुवाँ, खरानी, ​​धुलो, धुवाँ, रसायन, परागकण, एलर्जेन, ओजोन, र ब्याक्टेरियाबाट विषाक्त हावा सास फेर्ने छोटो र दीर्घकालीन स्वास्थ्य खतराहरू बाट रक्षा गर्न को लागी एक एयर फिल्टर मास्क हो। वायु प्रदूषणको संकटमा परेका घरपालुवा जनावर मालिकहरूले अब आफ्ना कुकुरहरूका लागि शुद्ध हावा छनौट गर्न सक्दछन्।
"कुनै पनि बेला कुनै व्यक्तिले एयर फिल्टर मास्क लगाउनुपर्दछ, उही वातावरणमा कुकुरलाई जोगाउनु आवश्यक पर्दछ। मानिस र उनीहरूका घरपालुवा जनावरहरू चरम वायु प्रदूषणबाट अझ सुरक्षित हुनु आवश्यक छ। क्यालिफोर्निया जस्ता ठाउँहरूमा वन्यजन्तुहरू दुर्भाग्यवस बनेका छन्। नयाँ सामान्य। वायु प्रदूषण सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान पत्ता लगाउनु, जस्तै वन्य आगोको धुवाँ, राम्रो एयर टोलीको नम्बर एक लक्ष्य हो। हामी कुकुर मालिकहरूलाई उनीहरूको घरपालुवा जनावरको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न नयाँ समाधानको साथ सशक्त बनाउँदैछौं। " गुड एयर टीमका सीईओ किर्बी होम्स भन्छन्।
घरपालुवा जनावरहरूको लागि वायु प्रदूषणको बढ्दो समस्या
क्यालिफोर्नियाभरि भर्खरैको ज wild्गल आगोले जनावरहरूलाई विषाक्त धुँवाको हानिकारक प्रभावहरूबाट जोगाउने चिन्ताको विषय बनायो। जंगल आगोको धुवाँ खतरनाक छ किनकि यसले फोक्सोमा श्वासप्रश्वास गरेपछि सजिलै रक्तप्रवाहमा लीन हुने विषाक्त हावा कणहरू उत्पादन गर्दछ। यी विषाक्त कणहरूले मानिस र घरपालुवा जनावरहरूमा तत्काल र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। धुवाँ इनहेलेसनले स्वास्थ्य समस्याहरूमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ, सास फेर्ने रोग, फोक्सोको क्यान्सर, र मुटुको अवस्था सहित। K9 मास्काको साथ स dogs्कटमा कुकुरहरूलाई बचाउनको लागि अन्य महत्त्वपूर्ण प्रयोगहरू धुलो आँधी, ज्वालामुखी खरानी, ​​अश्रु ग्यास, रासायनिक स्पिल, रातो ज्वार ब्रेभोटोक्सिन, परागकण वनस्पति, एलर्जेन, ब्याक्टेरिया, मोल्ड र फg्गस हुन्।
कसरी K9 मास्क काम गर्दछ?
राम्रो एयर टीमले वायु प्रदूषणको समाधान गर्दै छ कुकुरहरूलाई नराम्रो हावा गुणवत्ताको विकल्प प्रदान गर्दै। K9 Mask® विशेष रूपमा कुकुरको थूलीको आकारको लागि डिजाइन गरिएको हो। प्रत्येक K9 मास्का आकारसँग समायोज्य घाँटी र थूथ्ने पट्टि हुन्छन् जुन विभिन्न आकार कुकुर जातहरूमा फिट हुन सक्छ। K9 मास्कामा प्रयोग हुने प्रतिस्थापन "चरम ब्रीथ" एयर फिल्टरहरू इनहेल्ड एयरलाई शुद्ध गर्नको लागि एयर फिल्ट्रेसनको चार तहहरू छन्। फिल्टरहरूले कुकुरहरूलाई सीडीसी (रोग नियन्त्रणका लागि केन्द्र केन्द्र) प्रयोग गरेर विषाक्त हावा फिल्टर प्रक्रियाको लागि एन 95 using (सबै गैर-तेल-आधारित वायु प्रदूषकहरूको%%% निस्पंदन) प्रयोग गरेर PM95 (२.ic माइक्रोन भन्दा कमको कण पदार्थ) व्यासमा) र विषाक्त रासायनिक कणहरू शोषणको लागि सक्रिय कार्बन।
एक अभिनव निकास भल्भको प्रयोग गरेर, प्यान्टि dogs कुकुरहरूले मास्कबाट तातो, श्वास बाहिर निकाल्न सक्छन्। K9 मास्के धुउन सकिने छ र कुकुरहरूलाई कुकुरलाई काटिबाट तनावमा राख्नबाट रोक्नको लागि उपयोगी छ जुन प्रायः प्राकृतिक प्रकोप संकटसँग सम्बन्धित छ। कुकुर मालिकहरूले अन्ततः उनीहरूका घरपालुवा जनावरहरूलाई हावा प्रदूषणबाट जोगाउन सक्छन्।
आगोको डरबाट प्रेरित
सानो छँदा, कर्बी क्यालिफोर्नियाको ओजइमा उसको हजुरबा हजुरआमाको घर वरपर पहाडहरूमा आगोको भड्किरहेको खबर सुनेर डराइन्। ऊ गर्मीको बिदाको बिदामा हप्ताको दुई वा दुई हप्ताका लागि हजुरबा हजुरआमालाई भेट्न ओजाइको भव्य, रमणीय शहर ओर्लदै बढेको छ। यी आगोको डरले किर्बीलाई प्रत्येक चोटि आगोको ज्वालाले उडाएको ठाउँमा हेरे, र अग्निशमनकर्मीहरूले उनको हजुरबुबाको छेउछाउको पहाडमा ब्लेजको सामना गरे।
पश्चिम तटमा हालैको वन्य आगोको तीव्रताका साथ २०१ 2017 तिर शुरू भई, किर्बीले क्यालिफोर्नियाका मानिसहरूलाई विषाक्त अग्निजन्य धुवाँबाट आफूलाई जोगाउन एयर फिल्टर फेस मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारे सोच्न थाले। उसलाई यो पनि भयो कि कुकुरहरूले ज wild्गलको आगोको मौसममा छोटो हिंड्नको लागि बाहिर जान र पिप खेल्न आवश्यक छ, तर कुकुरहरू कसरी विषालु धुँवामा सास फेर्नबाट बच्न सक्छन्?
उत्तरहरूको खोजीमा उनले कुकुरहरूलाई वायु प्रदूषणबाट बचाउन कुनै एयर फिल्टर मास्क पत्ता लगाएनन्। किर्बीले उनको चचेरो भाई इवानलाई यो समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न आग्रह गरे। तिनीहरू मिलेर राम्रो एयर टीम गठन गरे।
किर्बी र इभान दुबै टेक्सास निवासी र लामो समय अस्टिनका बासिन्दाहरू हुन्। कर्बीले टेक्सास टेक युनिभर्सिटी पढेका थिए र इभानले टेक्सास स्टेट युनिभर्सिटीमा भाग लिए। इवान एक अनुभवी उत्पाद डिजाइनर हो जसले डेल टेक्नोलोजीमा डिजिटल मिडिया र टेक्नोलोजी युएक्स (प्रयोगकर्ता अनुभव) मा अनुभवको साथ काम गर्दछ। किर्बी एक वैश्विक नेता हो जुन स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर-नाफामुखी संस्थाहरूमा मिसनरी र पास्टरको रूपमा सेवा प्रदान गर्ने मर्मत उत्पादन मन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सँगै तिनीहरू उच्च टोली र व्यक्ति-केन्द्रित समाधानहरूको साथ विशेष रूपमा घरपालुवा जनावरहरूको लागि समूह बनाउँदछन्।
कोरोनाभाइरसको बारेमा के हुन्छ?
अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशनले टिप्पणी गरे कि घरपालुवा जनावरहरू COVID-१ easily मा सजिलैसँग संक्रमित भएको देखिँदैन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा for 19 परीक्षण मात्र सकारात्मक लाग्यो। यी स्ख्यामा अप्रिलमा न्यु योर्कको चिडियाखानामा चार बाघ र तीन सिंह, thirty१ जना पाल्तु बिरालाहरू र संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्ने तेवीस पाल्तु कुकुरहरू समावेश छन्।
उत्तरी क्यारोलिना पग, टेक्सासको एक योर्की, र न्यू योर्कमा एक जर्मन शेफर्ड जस्ता घरपालुवा जनावरहरूमा यी तितरबित COVID-19 केसहरूले थुप्रै कुकुर र बिराला मालिकहरूलाई रोकिन्छन्। CDC ले हालसालै यी केसहरूको आधारमा पाल्तु जनावर मालिकहरूको लागि यसको मार्गदर्शन अपडेट गर्यो। प्रायः घरपालुवा जनावरहरू भाइरसको लागि परिक्षण हुने प्रायः केसहरू ती ज्ञात पाल्तु जनावर मालिकहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा थिए जो COVID-19 सँग सकारात्मक छन्।
पशुचिकित्सकहरू कुकुरहरूका लागि एक मास्कको बारेमा के भन्छन्?
केही पशु चिकित्सकहरूले कुकुरहरूको लागि एयर फिल्टर मास्कको प्रयोगलाई खारेज गरे किनभने उनीहरूले कुकुरमा मात्र मानव मास्क लगाउन खोजेको हो। मानव अनुहार र कुकुरको टुप्पाको आकार स्पष्ट रूपमा फरक छन्, कुकुरमा मानव मास्कलाई प्रभावहीन बनाउँदै। K9 मास्काले एउटा एयर फिल्टर मास्क सिर्जना गरेको छ कुकुरको थूलीको आकारमा फिट गर्नको लागि कि यो सुरक्षित र स्नुउटमा प्रभावकारी हुनेछ।
हामी टेक्सास ए एण्ड एम विश्वविद्यालय साना पशु क्लिनिकल विज्ञान विभागका साथ कुकुरहरूको बारेमा वायु प्रदूषणको खतराबाट जोगाउने कुराकानीमा सक्रिय छौं। त्यहाँ एक सम्झौता छ कि कुकुरहरूको लागि एक एयर फिल्टर मास्कको विशिष्ट वातावरणमा फाइदा हुन्छ। हामी यो पनि बुझ्दछौं कि मास्कलाई कुकुरमा थोरै समयको लागि लगाउनुपर्दछ र दृश्य निगरानीको साथ कुकुरलाई सम्भवतः अत्यधिक तापबाट बचाउन सकिन्छ।
K9 मास्क संयुक्त राज्य अमेरिका मा निर्मित
२०१ 2019 को मार्चमा किकस्टार्टर क्राउडफन्डि campaign अभियानलाई सफलतापूर्वक फन्डि। गर्दै, राम्रो एयर टीमले पहिलो उत्पादन K9 मास्कलाई पूर्ण रूपमा कोष दियो। K9 Mask for को लागि सबै निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिकामा डलास, टेक्सासका शिल्पकारहरू द्वारा गरिन्छ। कुकुरहरूका लागि K9 मास्क एयर फिल्टर हाल एक अस्थायी पेटेन्टको साथ सुरक्षित छ, र मास्कको लागि एक युटिलिटी प्याटेन्ट पहिले नै फाइल गरिएको छ। तिनीहरूले वेबसाइट मार्फत बिक्रीमा २$०,००० भन्दा बढी उत्पन्न गरेका छन् www.K9Mask.com र Amazon.com। राम्रो एयर टीम कुकुरहरूलाई वायु प्रदूषणबाट बचाउने भविष्यको बारेमा आशावादी छ।
लस भेगासमा शार्क ट्याankक फिलिमिंग
क्यालिफोर्नियामा क्वारन्टाइन कडा मार्गनिर्देशनहरूको परिणामस्वरूप चलिरहेको महामारीको साथ, टेलिभिजन उत्पादन कम्पनीहरूले लस एन्जलसको शरद forतुको लागि टेलिभिजन कार्यक्रमहरू फिल्म गर्न सक्दैनन्। त्यसो भए, तिनीहरू मध्ये धेरैले मेक्स-शिफ्ट उत्पादन स्टुडियो स्थापना गर्न आफ्नो उत्पादन टोली र उपकरणहरू लस भेगासमा लगे। "शार्क ट्याank्क" लस भेगास स्ट्रिपमा भेनेसियाली होटल र रिसोर्टमा फिल्माइएको थियो। किर्बी र इवान सहित सबै उद्यमी सहभागीहरू सबै कास्ट, चालक दल र शार्कको स्वास्थ्य बचाउन कडा संगरोध मार्गनिर्देशनको अधीनमा थिए "शार्क ट्याank्क" को यस सिजनको लागि फिल्म बनाउनका लागि स्थानमा।
K9 Mask® मा अधिक जानकारी को लागी: K9Mask.com
K9 मास्क परिचय भिडियो: https://vimeo.com/362541057
शार्क ट्याank्क छविहरू - https://www.wdtvpress.com/abc/shows/shark-tank/photos/
कुकुरहरु को लागी वायु प्रदूषण मास्क
← पुरानो पोस्ट
नयाँ पोस्ट →